Iveki Eyingcwele yeLente 2016: NgoLwesibini, ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo ngaphambi kwePasika. Indlela yokuzila ukutya kwiZixhenxe ezithandekayo
Okunye Ieholide Zithuba
Iveki Eyingcwele - iveki yokugqibela ngaphambi kwePasika, eneempawu ezikhethekileyo zokomoya, ezinokukwazi ukutshintsha nawuphi na umOthodoki. Iicawa zeCawa, unqulo kule mihla enkulu umqeqeshi woBomi obungunaphakade kunye nemfihlelo yoSindiso. Iveki Eyingcwele Ixesha elihle-ixesha lilukhuni kwaye livuya, kuba ekupheleni kweveki engcwele yeThembe likaCawa likaKristu elilindelekileyo.
I-Lent Great: Iveki eNgcwele ngo-2016
Iveki Eyingcwele yeLente yilexesha elixabisekileyo, kwaye iinkonzo zeeVeki eziNgcwele zizona zinkonzo ezilungileyo kakhulu zonyaka. Ukulungelelanisa ubuqaqawuli ngenxa yeembandezelo zikaThixo, iCawe ifakeka kwinkonzo yeentsuku zokuqala ezintathu zeVeki eyingcwele umlinganiso wokuzilahla ngenxa yesono. NgoLwesithathu inkonzo yeLenten iphelile, izandi zokulila kunye nokukhala ziphela kwiintempile, iinkonzo ezivela entliziyweni nezithintekayo ziqala: ngoLwesine i-Liturgy yeBasil Omkhulu inikwa kwaye iincwadi zeVangeli ezi-12 zifundwa, ngoLwesihlanu zikhupha i-Shroud kunye nokungcwaba. Zonke ezi liturgi zinceda i-orthodox ukuba igxininise kwimicimbi yeVeki eNgcwele, ukuba iphile kunye noMsindisi.
Ngo-2016, iVeki Eyingcwele iya kuhlala ngo-Ephreli 25 ukuya ku-30 ​​ngaphambi kwePasika.
I-Lent Great: Iveki Eyingcwele kunye neeRhafu zeNdabuko
Amakholwa akhumbula uMphathiswa uJoseph kunye neendaba zeVangeli malunga nesiqalekiso sikaThixo ngomkhiwane ongakhiwa, umfanekiso wakhe ufuzisela umphefumlo ongathwali iziqhamo zomoya - imisebenzi emihle, ukholo, ukuguquka, umthandazo.
NgoLwesibini Omkhulu ngaphambi kwePasika
AmaKristu adumisa uMsindisi ukukholelwa ngababhali nabaFarisi, phendula imifanekiso eyayithetha eYerusalem.
Ngentlungu entliziyweni yama-Orthodox khumbula ukungcatsha kukaKristu ngoYudas nomoni owawulungiselela uNyana kaThixo ukuba angcwatywe aze ahlambe iinyawo zakhe ngeenyembezi zakhe.
Lwesine Lwesine (olucocekileyo)
Umhla uzele izikhumbuzo zeemeko ezibalulekileyo zevangeli-ukungcatsha kukaYudas, kusihlwa ngokufihlakeleyo, umthandazo kaThixo kwiMyezo waseGetsemane. NgoLwesine ococekileyo kuyisiko lokuxolela inhlama yeefake ze-Easter kunye nopopayi amaqanda.
Ukuzila ukutya ngoLwesithathu noLwesihlanu
NgoLwesihlanu Omkhulu ngaphambi kwePasika
NgoLwesihlanu Ongcwele ngaphambi kwePasika, amaKristu akhumbuza ukufa kukaYesu emnqamlezweni, kwiicawa zikhona iinkonzo ezintathu: iwashi yasebukhosini, iVespers (ukuthatha i-Shroud), imithanjeni yokungcwaba. Kwiicawa ezininzi emva kweVespers elithi "Isililo seNtombikazi" sihlabelelwa.
UMgqibelo Omkhulu ngaphambi kwePasika
ISabatha elibi phambi kwePasika libonisa umgca esihogweni kunye noyiso lukaKristu phezu kwakhe. Ubume baloo mini buboniswa ngamagama: "Yinyani inyama yomntu, akukho nto ixabana ngaphandle kokuzicingela." NgoMgqibelo, amaqanda e-Easter ancweliswa kwiicawa zeOthodoki, kwaye ummangaliso omkhulu eJerusalem yi-convergence yomlilo osikelelekileyo.
NgeCawa Ekhanyayo kuKristu
Iholide yenkolo ephawulekayo, ebonakalisa uvuko loMsindisi. Iimpawu eziphambili zePasika ziamaqanda anemibala, amaqanda e-Easter kunye nomlilo. Kwietempile kukho iinkonzo ezizodwa, i-liturgy ekhethekileyo ihanjiswa - i-Bright Easter Matins.
Iveki Eyingcwele yeLente Elikhulu
Indlela yokuzila ukutya kwiVeki eNgcwele yeLente
Ukuziphepha ekutyeni kukuqinisa iimvakalelo zokomoya kwaye kuhlambulule inyama. Ibandla lifuna ukuzila ngokukhawuleza kwiintsuku zokuqala ezintathu, ukududuzwa okuncinci kuvunyelwe ngoLwesine, ngoLwesihlanu ukugatywa okupheleleyo kokutya ekukhunjweni kokubethelwa nokufa kukaYesu kuyalelwe. Ngexesha leveki eyingcwele akuvumelekanga ukuba adle iintlanzi, ubisi, iimveliso zenyama kunye namaqanda, ukutya okutshatyalaliswa ngotshwala, imifuno, izithelo, imifuno ebosiwe kunye nama porridges abilisiwe.
Imenyu yesampula yeveki eyingcwele
Ukuzila ukudla ngoMvulo
isidlo sasekuseni: isonka esimnyama, isaladi ephilileyo , itiye le-ginger;
ngesidlo sasemini: isobho se-walnut, isaladi ye-beet, isandwich kunye netamatato;
isidlo: i- oat flakes kunye nobusi kunye nezithelo ezomileyo, ubisi lwe-almond;
Ukuzila ukutya NgoLwesibini (Ukunyulwa)
kwasekuseni: isandwich kunye namakhukhamba kunye ne-shrimps, itiye;
isidlo sasemini: isobho esinamakhowa , ii-eggplants ezigxiliweyo, ii-apula eziphekiweyo kunye nobusi nama-crranberries;
isidlo: isaladi eluhlaza, i-potato inyamaballs, iglasi yewayini ebomvu, ushizi osiyiweyo.
Iingoma ze-Byzantine zeLente kunye neveki ezinomdla
Ukuzila ukutya ngoLwesithathu
isidlo sasekuseni: ibilongwe yebhakkwheat ebilisiwe, i-avocado puree, itiye leengqolowa;
isidlo: isaladi ye-beet ne-honey and pine nuts, isobho esinomsoco, itiye ye-herbal;
isidlo: isinxephezelo isonka, ubisi oluvela kwimbewu yamathanga.
Ukuzila ukutya ngoLwesine
isidlo sasekuseni: ikhofi kunye nobisi (soy), isandwich eneebhanana;
isidlo: isaladi yamakhukhamba kunye nama-radishes, ama-dumplings anama-mushroom, agqoke ukhilimu we-soy;
isidlo sakusihlwa: i-cranberry juice, i-lazy cabs rolls.
Ukuzila ukutya ngoLwesihlanu
Ngaloo mini, kubalulekile ukuyeka ukutya kuze kube ngu-Friday's vespers, iil salads ezikhanyisiweyo zivunyelwe ukuba zidle.
Ukuzila ukudla ngoMgqibelo
isidlo sakusasa: ikhukhamba, isinkwa esimnyama, itiye yemifuno;
isidlo: i-zucchini, isobho esinomzimba ngaphandle kwebhotela, iglasi yewayini;
isidlo: irayisi ebilisiwe kunye negarlic, basil, i-tomato sauce; iglasi yewayini.
KwiLente Elikhulu, Iveki Eyingcwele yinto engcwele, enokumnqumla okholwayo kwimihla ngemihla kwaye imphosele ekulindeni kokulindela kokubhiyozelwa kwePasika. Iintlupheko ezisixhenxe zixesha lezilingo, ngoko ke ooBawo beCawa bacebisa ama-parishioners ukuba banakekele ngokukodwa imiphefumlo yabo, ukuze bangabhubhisi umsebenzi wokuzila. Musa ukuvumela iingxabano, umsindo, ukunyaniseka kunye noncedo lukaThixo ngokukhuselekileyo ziphile kude kube yiPasika.
NgoLwesihlanu, i-Easter, iBandla likhumbula umcimbi owonakalisayo kumlando wabantu
Ikhalenda yeOthodoki yamandla weLente 2018 - itafile eneemenyu nganye imihla
Xa ungadla iintlanzi kunye neentlanzi zasemanzini kwiLent
Ikhalenda Elikhulu Lentente - oko ungayidla ngeentsuku
Ngaba kunokwenzeka ukuba i-Lenten ioli, iimpahla ezibhakiweyo, amaqanda, i-pancake kwi-Lent?
Ukuzila okukhulu kwamaKristu - imigaqo yokuzila
Ukutya okuchanekileyo kwiveki
Imifanekiso enhle kunye nehlekisayo, amakhadi okubulisa kunye novuyo ngosuku lokuqala lwenkwenkwezi 2018
Imigaqo yokunyamekela kwigumbi le-dracaena
Ukubhenela i-recipe yeeyi: i-aircake yombala omithathu
I-tonsillitis: unyango kunye nezilwanyana zomntu
Izihloko ezizithandayo zokuthetha amantombazana kunye namadoda
UAlbina Dzhanabaeva ngokokuqala ngqa wathetha ngokucacileyo ngencwadana enoVelery Meladze